Super Vectorizer 2, oo ah qalab xirfadle ah oo qiimo jaban | Waxaan ka socdaa mac
Super Vectorizer 2, oo ah qalab xirfadeed oo qiimo jaban lagu kala iibsado
Toddobaadkii wuu sii socdaa iminkana oo aan u dhowaanayno dhulbaraha, ma waayi karno xaqiiqda ah inay sii wadaan sameynta muuqaal xiiso leh. dalabyada ku jira codsiyada in badan oo ka mid ah isticmaaleyaasheena ay jeclaan doonaan.
Maantana waanu ku keenay "Super Vectorizer 2", aalad naqshadeynta garaafka ah oo kuu oggolaaneysa inaad u beddesho sawirrada 'bitmap' sawirada vector-ka adigoo ilaalinaya midabbo badan oo dabiici ah. Laakiin tan ugu fiican waa inaad ka faa'iideysan doontaa a 95% dhimis hadaad iyada ku sameyso.
"Super Vectorizer 2" waa softiweer xirfad leh oo diiradda lagu saaray xirfadlayaal qaabeynta qaabdhismeedka iyo ardayda ku tababbaray edbintaan. Qalabkan, isticmaaleyaashu way awoodi doonaan si toos ah ugu beddel sawirada bitmap-ka sida JPEG, GIF, iyo PNG oo lagu beddeli karo garaaf dulle ah Ai, SVG, DXF iyo PDF.
Soo-saaraha barnaamijkan wuxuu sheeganayaa in "Super Vectorizer 2" uu adeegsanayo "gebi ahaanba algorithm tirada cabirka sawir ee wuxuu soo saaraa midab dabiici ah»Ka dib marka la sameeyo vectoration-ka, natiijooyinkiisu waxay si buuxda ula jaan qaadayaan aaladaha kale iyo barnaamijyada kale sida Illustrator, Corel iyo kuwo kaloo badan.
"Super Vectorizer 2" waa la jaan qaada in ka badan 70 qaabab muuqaal ah oo ay ku jiraan JPG, BMP, PNG, GIF, PDF, PSD, PNT, RGB, ARW, BMPF, CUR, CRW, CR2, DCR, DNG, EPSF, EPSI, EPI, EPS, EXR, EFX, ERF, FPX, FPIX, FAX , FFF, GIFF, G3, HDR, ICNS, ICO, JP2, JFX, JFAX, JPE, JFIF, JPF, MPO, MAC, MRW, MOS, NRW, NEF, ORF, PICT, PIC, PCT, PS, PNTG, PNGF , PEF, QTIF, QTI, RAW, RAF, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, SGI, TRIC, TIFF, TGA, TARGA, TIF, XBM, 3FR, 8BPS
Super Vectorizer 2 sidoo kale waxay bixisaa sacab muggiis oo wanaagsan qalabka tafatirka, kala-sooc si otomaatig ah, iskudhafid xariijin toos ah, ikhtiyaarro si loo kala shaandheeyo sawirrada iyadoo la adeegsanayo Qalfoofka ama Laynka, saxsanaanta weyn, taageerada daahfurnaanta iyo hawlo badan oo dheeri ah oo xirfadlayaasha qaybtani sifiican u fahmi doonaan.
Super Vectorizer 2 Waxay leedahay qiimo caadi ah oo ku dhow afartan euro, si kastaba ha noqotee hadda waad heli kartaa kaliya € 2,29 on Mac App Store mahadnaqa Laba Dollar Talaadada dallacsiinta. Laakiin dhaqso maxaa yeelay dalabku wuxuu dhammaanayaa saqbadhkan.
Super Vectorizer Pro24,99
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Super Vectorizer 2, oo ah qalab xirfadeed oo qiimo jaban lagu kala iibsado
Shumaca uraya sida Mac ayaa soo noqday, sanadkaan oo leh magaca Inspire, laga bilaabo laba iyo toban koonfur
CarPlay waxay noqotay baahi loo qabo adeegsadayaal badan